सीमानाकामा भारतीय पर्यटक गणनाको तयारी
काठमाडौँ, असोज १८ गते । सीमानाकाबाट नेपाल भित्रने भारतीय पर्यटकको सङ्ख्या पत्ता लगाउन परीक्षणका रूपमा यसको गणना सुरु गरिने भएको छ । नेपाल पर्यटन बोर्डले दक्षिणतर्फका प्रमुख नाकामा तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि आफ्नै एकाइ सञ्चालनमा ल्याई भारतीय पर्यटकको गणना गर्ने भएको हो । विशेष गरी लुम्बिनीलगायत प्रमुख पर्यटकीयस्थलमा घूमघामका लागि आउने भारतीय पर्यटकको वास्तविक तथ्याङ्कको अभाव रहेकोले यस्तो काम सुरु गर्न लागिएको बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपकराज जोशीले जानकारी दिनुभयो । यसै आर्थिक वर्षभित्र बोर्ड आफैले तथ्याङ्क सङ्कलन सुरु गर्छ, उहाँले भन्नुभयो ।
सीमा नाकाबाट नेपाल भ्रमणमा आउने भारतीय पर्यटकको अहिलेसम्म आधिकारिक तथ्याङ्क कुनै पनि निकायसँग उपलब्ध छैन । लुम्बिनीजस्ता गन्तव्यमा दैनिक सयौँको सङ्ख्यामा भारतीय पर्यटक आएर फर्किने भए पनि नेपाल आउने कुल पर्यटकको सङ्ख्यामा यसको गणना हुने गरेको छैन । बर्सेनि नेपालमा लाखौँ सङ्ख्यामा आउने यस्ता पर्यटकको पहिचान गरी तथ्याङ्क व्यवस्थापन गर्न पनि नाकाबाटै गणना सुरु गर्न लागिएको प्रमुख कार्यकारी जोशीले बताउनुभयो । अहिलेकै स्थितिमा पनि बर्सेनि दस लाखभन्दा बढी त्यस्ता भारतीय पर्यटक नेपाल भ्रमणमा आउँछन्, उहाँले भन्नुभयो । तथ्याङ्कको अभावमा नेपाल भित्रिने पर्यटकको सङ्ख्या कम देखिएको र यसले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि फरक किसिमको प्रभाव पारिरहेको उहाँको भनाइ छ ।
बोर्डले नाकामा आफ्नै कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिएर भ्रमण उद्देश्यका लागि नेपाल आउने भारतीय पर्यटकको सङ्ख्या गणना गर्ने योजना बनाएको छ । हवाई मार्ग प्रयोग गरी नेपाल आउने भारतीय पर्यटकको सङ्ख्यालाई मात्र अहिलेसम्म आधिकारिक तथ्याङ्कका रूपमा लिने गरिन्छ तर सो सङ्ख्या भन्दा निकै बढी पर्यटक सीमानाकाबाट नेपाल हुँदै प्रवेश गर्छन् । यसरी सङ्कलन हुने तथ्याङ्कले नेपालको पर्यटन क्षेत्रको आकार र वास्तविकताका विषयमा पनि थप नयाँ तथ्याङ्क पत्ता लाग्ने बोर्डले जनाएको छ । अध्यागमन विभागको तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्षभर हवाई मार्ग प्रयोग गरी नेपाल आउने पर्यटकमा पनि भारतीय पर्यटक नै सबैभन्दा बढी छन् । उक्त एक वर्ष अवधिभर एक लाख ४६ हजार चार सय ५६ भारतीय पर्यटक हवाईमार्गबाट नेपाल आएका छन् । नेपाल भित्रिने धार्र्मिक पर्यटकमध्ये अधिकांश भारतीय पर्यटक नै रहेका छन् । पशुपतिनाथ, लुम्बिनी तथा मुक्तिनाथजस्ता धार्मिक क्षेत्रमा भारतीय पर्यटकको आकर्षण बढ्दै गएको छ । यसबाहेक पछिल्लो समय हिमाली क्षेत्रमा पनि भारतीय पर्यटकको चासो बढेको छ ।
म्याग्दी । बेनी–जोमसोम सडक हुँदै हिमालपारिको जिल्ला मुस्ताङ भम्रण गर्ने आन्तरिक पर्यटक बढेका छन् ।
दसैँ बिदा सदुपयोग गर्दै मुस्ताङको भम्रणमा आउने पर्यटकको सङ्ख्या बढेपछि म्याग्दी सदरमुकाम बेनी, गलेश्वरलगायतका क्षेत्रका होटल भरिभराउ भएका हुन् । दसँैको टीकाको भोलिपल्टदेखि मुस्ताङ भम्रणमा आउनेको भीड बढेसँगै होटल भरिभराउ भएको र होटलको क्षमताभन्दा पनि बढी पाहुना आउन थालेपछि व्यवस्थापन गर्नै मुस्किल परेको बेनीस्थित होटल शिखरका सञ्चालक सुजन बरुवालले बताउनुभयो । दसँै बिदामा मुस्ताङ भम्रण गर्नेले बास बस्न बेनीका होटलमा अग्रिम बुकिङसमेत गर्न थालेका छन् । पर्यटकको चाप बढेपछि बेनीका ठूला तथा साना होटल पाहुनाले दैनिकजसो भरिभराउ हुन थालेका हुन् । मुस्ताङको प्रसिद्ध मुक्तिनाथ, लोमानथाङलगायतका ठाउँको भम्रणका लागि नेपालका विभिन्न क्षेत्रबाट सयौँको सङ्ख्यामा मोटरसाइकल र अन्य सवारीसाधनमार्फत आन्तरिक पर्यटक भित्रिरहेको दानाका होटल व्यवसायी इन्द्रसिंह शेरचनल जानकारी दिनुभयो । निजी तथा सार्वजनिक सवारीसाधन हुँदै पर्यटक भित्रिने क्रम बढेपछि बेनीसँगै बेनी–जोमसोम क्षेत्रका होटल व्यवसायी उत्साहित छन् । निजी सवारीसाधनमा आएका पर्यटकले मुस्ताङसँगै सडकखण्डअन्तर्गत पर्ने म्याग्दीको धार्मिक एवं पर्यटकीयस्थल गलेश्वर, तातोपानी कुण्ड, रुप्से झरना, अन्धगल्छीलगायतका पर्यटकीयस्थलको समेत अवलोकन गर्ने गरेका छन् ।
प्रतिबन्ध खुल्ला भएपछि पर्यटक खुसी
इलाम । भारतीय सीमावर्ती सिंहलीला नेसनल पार्कले रेडपाण्डाको प्रजनन समयमा पर्यटकको आवागमनमा लगाएको प्रतिबन्ध खुल्ला गरेको छ ।
गत जुन १५ तारिखदेखि तीन महिनासम्मका लागि पार्कले लगाएको प्रतिबन्ध खुल्ला गरेको हो । पार्कले सेप्टेम्बर १५ तारिखदेखि रेडपाण्डा हेर्न पर्यटक र सर्वसाधारणका लागि खुल्ला गरेको जनाएको छ । पार्कले इलामको तुम्लिङदेखि पा“चथरको फालोटसम्मको सीमा क्षेत्रमा नेसनल पार्कक्षेत्रभित्रको पदमार्गमा पर्यटक हिँडडुलमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । रेडपाण्डा हेर्नका लागि अहिले पर्यटक आउन थालेको स्थानीय जमुनाका कुमार गुरुङले बताउनुभयो ।
दुर्लभ रेडपाण्डालगायत विश्वमा लोपोन्मुख वन्यजन्तु र चराचुरुङ्गीको प्रजनन र यौन क्रियाकलापको समय भएको भन्दै पार्कले प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
तीन महिनामा रेडपाण्डाले प्रजनन समय पार गरिसकेको जनाउ“दै पर्यटकलाई रेडपाण्डा हेर्न खुल्ला गरिएको पार्कले जनाएको छ । कञ्चनजङ्घा बेस क्याम्प जान भारतले सीमा क्षेत्रमा पशुपतिनगरको मानेभञ्ज्याङदेखि पर्यटन पदमार्ग निर्माण गरेको छ ।
पर्यटन पदमार्ग भएर सीमा क्षेत्रका नेपाली पर्यटकीयस्थलमा ट्रेकिङका लागि भारतलगायत तेस्रो मुलकका सयौँ पर्यटक आउजाउ गर्दै आएका छन् ।
पार्क खुल्ला हुनुअगावै पर्यटक आउन थालेपछि उत्तरी क्षेत्रका होटल भरिभराउ हुन थालेका छन् । पर्यटकको जमघट सुरु भइसकेको माईजोगमाई–२ स्थित तुम्लिङका होटल व्यवसायी तिलक गुरुङले बताउनुभयो ।
तीन महिनादेखिको सुनसान ठाउँमा पर्यटकको चहलपहल बढेको छ, उहाँले भन्नुभयो । पर्यटकीयस्थल मानेभञ्ज्याङ, चित्रे, मेघ्मा, तुम्लिङ, जौवारी, गैरिवास, कैँयाकट्टा, कालपोखरी, बिर्खभञ्ज्याङ र सन्दकपुर क्षेत्रमा वर्षौंदेखि भारत भएर पर्यटक आउने गरेका छन् । कञ्चनजङ्घा, सगरमाथालगायतका हिमशृङ्खला, राष्ट्रिय फूल लालीगुराँस, लोपोन्मुख जडीबुटी, हिमाली जीवनशैलीको अवलोकन गर्न सकिने सीमावर्ती नेपाली पर्यटकीय क्षेत्रमा विकासको अभावमा पार्कको प्रतिबन्ध खुल्लापछि स्थानीयवासी र पर्यटक खुसी भएका छन् ।
सल्लेरी, सोलुखुम्बु, । खुम्बुपासाङ ल्हमु गाउँपालिकाले पर्यटक प्रवेश शुल्क उठाउन सुरु गरेको छ ।
पदयात्री सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (टिम्स) कार्ड निषेध गर्दै उक्त गाविसले गाउँपालिकाले अक्टोबर १ तारिखदेखि नै शुल्क उठाउन थालेको हो । मौसम प्रतिकूल भए पनि पनि अक्टोबर एक तारिखका दिन हेलिकोप्टरमार्फत आएका १०१ बाह्य पर्यटकबाट दुई हजारका दरले पर्यटक प्रवेश शुल्क लिइएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । नेपाल पर्यटन बोर्ड र टानले ११ वर्षदेखि निरन्तर टिम्स कार्डबापत प्रतिपर्यटक रु. दुई हजार शुल्क लिँदै करोडौँ पर्यटक प्रवेश शुल्क उठाए पनि खुम्बु क्षेत्रमा पर्यटन प्रवद्र्धनका कुनै पनि काम नगरेकाले गत असार २५ गते बसेको गाउँकार्यपालिकाको बैठकले टिम्स कार्ड निषेध गर्ने र आफैँले पर्यटक प्रवेश शुल्क उठाउने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयको आधारमा अक्टोबर १ तारिखकै दिन मन्जोमा रहेको टिम्स कार्ड चेकपोस्टसमेत हटाएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । यस कार्यबाट पर्यटक दोहोरो मारमा परेका छन् भन्दै पर्यटन व्यवसायी नाम्गेल शेर्पाले सो निर्णयले पर्यटकले विगतमा रु. पाँच हजार ३९९ प्रवेश शुल्क बुझाउनुपर्नेमा अहिले रु. सात हजार ३९९ बुझाउनुपर्छ । टान र पर्यटन बोर्डलाई टिम्स कार्ड वितरणको जिम्मा दिएको अवस्थामा गाउँपालिकाको निर्णयले पर्यटन क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने पर्यटन व्यवसायीको टिप्पणी छ । टानका महासचिव कर्ण लामाले गाउँपालिकाको यो अपरिपक्क निर्णयले गाउँपालिकालाई नै असर पर्ने हँुदा तत्काल निर्णय सच्चाउनुपर्नेमा जोड दिनुहुन्छ भने गाउँपालिकाका अध्यक्ष ङिमदोर्जी शेर्पाले भने संवैधानिक अधिकारको प्रयोग गर्दै आफूहरूले पर्यटक प्रवेश शुल्क निर्धारण गरेको